Sawiro Dibax Baxyo Gaari Looga Qabsaday Shisheeyaha Oo Muqdisho Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Sawiro Dibax Baxyo Gaari Looga Qabsaday Shisheeyaha Oo Muqdisho Ka Dhacay.
August 7, 2017 5:57 pm Views: 840
Shacab careysan ayaa isugu soo baxay qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Muqdisho kuwaasi oo ka cabanayo wadooyinka u xiran ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo dowlada Farmaajo.
Dibadbaxayaashan oo u badan Milkiilayaasha iyo wadayaasha Mooto Bajaaj-ta oo ah mid si aad ah looga isticmaalo islamarkaana ay raacaan shacabka magaalada Muqdisho xilliyada ay u adeegdoonanayaan ama dano u aadayaan suuqyada iyo xaafadaha kala duwan ee gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho.
Dibad baxayaasha ayaa adeegsanayay dhagaxaano,Taayeero iyo birar waxeyna gabi ahaan iyagoo careysan xireen wadada Maka Al-mukaramah iyo wadooyin kale oo muhiim ah.
Isgoyska KM4 oo ka mid ah goobaha dibadaxyada ugu xoogan ka dhaceen ayaa intii dibad baxan socday waxaa wadada soo maray kolanyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaasi oo doonayay iney xoog ku jiiraan dadka careysan ee wadada xirtay.
Dibadbaxayaasha ayaa dhagaxaan ku tuuray gaadiidka gaalada AMISOM waxeyna ugu dambeyntii dibad baxayaashu la wareegeen mid ka mid ah gaadiidka ay wateen shisheeyaha soo duulay.
Dadkan ka careysan wadooyinka u xiran Kufaarta iyo Murtadiinta ayaa gaariga ay ka qabsadeen shisheeyaha ka qaatay gabi ahaan waxii agab ahaa oo saarnaay gaariga waxey sidoo kale furteen biro iyo agabyo kale oo muhiim ah kuwaasi oo qeyb ka ah qalabka uu ka koobanyahay gaarigaasi.
Ciidamada Shisheeye ayaa gabi ahaan gaariga goobta uga cararay iyadoona darawalkii gaarigan ka xeynayay iyo askartii saarneed ay naftooda kala baxsadeen shacabka careysan ee gaariga sida xooga ah kusoo fuulay.
Dibad baxaan ayaa ah mid shacabka Muqdisho ay ku muujinayaan dhibaatooyinka aan kala joogsiga laheen ee waqti walbo ay kala kulmaan ciidamada gaalada iyo kuwa dowlada Ridada federaalka ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Halkan Ka Daawo Sawirada.
Alxamdulilaah waxaa weli noo jooga wiilal dhalinyaro ah oo ruux kujirto ee hala kiciyo waxaadna sugeeysaan gaalooy sidaa in soomaalia leeydinkaka saari doono
Duli wada araadil ah waxaa kale ood halmaamteen dhalinyarta qartay qoraalkaan in gaalkii waday meesha asoo garaaba laga qaaday waliba gaaladina kacarareen